PressReader - Kwayedza: 2017-11-10 - MAPOROFITA OTENGA 'VAROYI'
MAPOROFITA OTENGA 'VAROYI'
... kupupura nhema
Madzimai Otillia Dheka (47) vanobva kwaGutu — asi vachigara kuEpworth uye
vachipinda chechi yeJohane Masowe weChishanu — vanoti nyaya yevanhu vanotengwa nemaporofita yakurumbira zvikuru. “Tinonzwa kuti zviri kuitika kumamwe machechi evanhu vanotsvaga mukurumbira emari,” vanodaro.
Vanoti vanonzwawo zvakare kuti nyaya dzemabhidhiri dziri kuitika kuShamva, kuMashonaland Central uko kunonzi kune muporofita anotenga vanhu kuti vanyepere kubatwa nemamhepo pasowe pake. Kwayedza yakaitawo hurukuro nevagari vekunzvimbo dzakasiyana dzinoti Glen Norah, Glen View, Budiriro, Highfield, Mufakose neWaterfalls muHarare nevekuNorton avo vose vari kutsinhira nyaya dzemabhidhiri. Vachipindura mibvunzo pamusoro penyaya iyi, Madzibaba Strive Masango (30) vechechi yeKubata kwaVapositori iri kuRugare, muHarare vanoti nyaya yemabhindiri iri kutaurwa zvikuru.
naAaron Nyamayaro (munyori weH-Metro) zvakatoipa, munovengwa nevamwe venyu plus munonzi munosimudza mamwe maporofita vamwe movapunzira pasi,” vano- daro Madzibaba Masango.
Zvimwe zvezvaiitika kuZimpapers Annual Cancer Power Walk nomusi weMugovera wadarika. — Mifananidzo naShelton Muchena.